Kenya Airways oo markale xaqiijisay dib u bilaabista duulimaadyadeeda Muqdisho - Halbeeg News
Kenya Airways oo markale xaqiijisay dib u bilaabista duulimaadyadeeda Muqdisho
NAIROBI (HLBEEG)-Maareeyaha shirkadda diyaaradaha Kenyan Airways, Sebastian Mikosz ayaa sheegay in qorshaha diyaaraddu ay ku bilaabeyso duulimaadyada Nairobi-Muqdisho in uu sare u qaadi doono is dhexgalka iyo xiriirka bulsho iyo midka dhaqaale ee ka dhexeeya labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya.
Shirkadda diyaaradaha ee Kenyan Airways ayaa markii labaad jadwal u dejisay duulimaadyo toos ah oo ay ku tagi doonto Muqdisho todobaadkan.
Shirkadda diyaaradaha dalka Kenya ayaa dib u dhaca duulimaadyada Muqdihso ku sababeeyay inaan la helin diyaarado cusub iyo caqabada la xiriira dhanka bixinta shuruudaha howlagallada diyaaradaha.
Wareysi Sebastian Mikosz uu siiyay wargeyska Standard Digital ayuu ku sheegay in diyaaradda Kenyan Airways ay 7 jeer sameyn doonto duulimaadyo si sare loogu qaado duulimaadyada iyo is dhax-galka wadamada Afrika.
“Duulimaadyada waxaa qaban doona diyaaradda Jambojet oo ah nooca Bombardier Dash 8 Q400 taasoo ka kicitimi doonta garoonka Joma Kenyatta 7:40 subaxnimo iyadoo ka degi doonta garoonka Caalamiga ah ee Aadan Cadde ee Muqdisho 10:45 barqo waxa ayna dib uga soo duuli doontaa 1-da duhurnimo” ayuu yiri Sebastian Mikosz.
Sida uu sheegay Sebastian Mikosz, duulimaadkan waxaa looga goolleeyahay in sare loogu qaado fursadaha maalgashi ee ay sameeyaan maalgashadayaasha iyo dalxiisayaasha labada dal.
“Duulimaadkan in aan Jaad ku qaadno diiradda inooma saarna. Waxaan dooneynaa in aan duulimaadyadeena ballaarino oo aan diyaar uga dhigno macaamiisheena maalgashadayaasha iyo dadka ka shaqeeya Soomaaliya”
Sanadkii 2006 ayey dowladda Kenya joojisay duulimaadyadii ay ku tegi jirtay Soomaaliya iyadoo ku sababeysay in ay korortay wax ay ku sheegeen weerarada Argagaxisanimo.
Madaxda Jabuuti iyo Suudaan oo Itoobiya booqasho ku jooga
Jubbaland: Waan bogaadineynaa dadaallada dhexdhexaadinta ee Aqalka Sare